Maimaim-Poana Filipina Mampiaraka Toerana Personals - Filipiana Oroka
Maimaim-Poana Filipina Mampiaraka Toerana Personals — Filipiana Oroka
Philippines, tamin’ny fomba ofisialy ny fantatra amin’ny anarana hoe ny Repoblikan’i Filipina dia masi-mandidy ny firenena nosy-firenena ao Azia Atsimo atsinanana no misy any amin’ny faritra andrefan’ny Ranomasimbe Pasifika.
Miaraka amin’ny mponina eo amin’ny zato tapitrisa ny olona, ny Filipina dia ny fahafito-firenena be mponina indrindra ao Azia ary ny firenena be mponina indrindra ao amin’ny tontolo izao. Ny Filipina dia iray tany mafana maritime toetrandro izay matetika mafana sy mando.
Ny eo ho eo isan-taona ny mari-pana manodidina
°C Nandritra ny zato foko, mifangaro ny hery vahiny sy ny fitambaran’ny kolontsaina sy ny zavakanto kokoa ny maha-tokana ny Filipiana ny maha-izy azy sy ny mahagaga fa dia ny Filipina. Izany dia fantatry ny rehetra fa Filipina vehivavy mahatoky, tsy mivadika, sy feno fanoloran-tena ny vadiny.
Ny izao tontolo izao manodidina ny fianakaviana
Filipiana vehivavy mijanona ny voalohany fianakaviana mandra-fanambadiana, ary avy eo dia ny fomban-drazana dia mitohy ny fianakaviana vaovao.
Efa natsangana mba hameno, mikolokolo sy ny fanajana ny lehilahy
Ao amin’ny Filipiana Oroka efa manampy ny lalao Filipina ankizivavy roa Filipiana ry zalahy sy iraisam-pirenena ry zalahy satria ny fitokanana hanomboka ao, ary ankehitriny dia an-jatony, an’arivony ny tokan-tena dia avy amin’ny firenena isan-karazany. Miaraka amin’ny fanampiana Filipiana Oroka, an’arivony lehilahy tokan-tena dia afaka hihaona, mpanadala sy ny daty amin’ny ny sasany ny tena hafakely ny ankizivavy eran-tany
← Maimaim-poana Filipiana Lahatsary amin'ny chat Room - Filipiana Chat, Filipiana olon-kafa Chat, Filipiana Cam Chat
Olana lehibe mba Handinika, Alohan'ny Fanambadiana ny Filipina →